VAOVAO SY SARY MITERAKA ALIKA NEWFYPOO - ALIKA
Vaovao sy sary miteraka alika Newfypoo
Alika mitambatra Newfoundland / Poodle mifangaro
Mello the Newfypoo (Newfoundland / Poodle mix) amin'ny 8 volana— 'Ity i Mello 8 volana taorian'ny volon-dohany voalohany. Sariaka be i Mello nefa tsy fantany ny halehibeny. '
Ny Newfypoo dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Terre-Neuve ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Olaf ny sôkôla sy ny Newfypoo fotsy, 7 volana eo amin'ny kianja filalaovana
Remi the black Newfypoo (Newfoundland / Poodle mix) amin'ny taona 1- 'Remi no Newfypoo izay antsoiko tamim-pitiavana ho Goofypoo. Milalao izy, manan-tsaina ary be fitiavana. Tony foana izy, na dia alika kely aza, ary tia matory toy ny itiavany milalao. Tena ara-tsosialy izy ary tia olona sy alika! Tiany ny milomano amin'ny fahavaratra ary milalao lanezy mandritra ny ririnina. Hijanona eo ivelan'ny tontolo andro mandritra ny ririnina izy fa tsy mandeha tsara amin'ny hafanan'ny fahavaratra. Ny fijeriny dia niova tanteraka nifototra tamin'ny hafohy nanapaka ny volony. Mahafinaritra izy miaraka amin'ny volo lava volo nefa maoderina fohy fohy mba hitazomana azy madio sy mangatsiatsiaka indrindra mandritra ny fahavaratra. '
Remi the Newfypoo (Newfoundland / Poodle mix) amin'ny taona 1 maka hatory kely eo am-pandriana.
Remi the Newfypoo (Newfoundland / Poodle mix) amin'ny 10 volana amin'ny lanezy.
Remi the Newfypoo (Newfoundland / Poodle mix) ho alika kely 3 volana.
Hugo the Newfypoo (Newfoundland / Poodle mix) amin'ny 1 1/2 taona, novolavolain'i Big Doodle Pups- 'Hugo no alika mamy indrindra! Zazalahy goavambe sy adaladala izy izay tia mikimpy, manenjika baolina ary mihazakazaka ary mitsambikina. Tiany ny mijoro amin'ny tongony aoriana ary miarahaba ny fianakaviany amin'ny fihin-doodle tsara indrindra hatramin'izay! Tsy milatsaka izy, manana toetra milamina, zazalahy mahalala fomba ary mitondra fifaliana lehibe ho an'ny fianakavianay! Hugo dia mamaritra tsara ny goavambe malefaka sy ny fahatsapana marina rehefa misy olona mahavita habibiana. Miady aminy foana ny zanako lahy ary rehefa nopotehin'ny zanako lahy ny taolan-tratrany dia tsy nitsambikina taminy indray mandeha i Hugo. Niara-nandry taminy izy mandra-pahasitrany ary ny faharoa dia niverina nody ny zanako lahy ary fantany fa tsy maninona ny miady aminy indray. Zazalahy marani-tsaina! '
Hugo the Newfypoo (Newfoundland / Poodle mix) amin'ny 9 volana dia toa an'i Chubaka avy amin'ny Star Wars! Hugo dia niteraka an'i Big Doodle Pups.
misy alika purebrida firy any
Hugo the Newfypoo (Newfoundland / Poodle mix) amin'ny 2 taona, novolavolain'i Big Doodle Pups
Hugo the Newfypoo (Newfoundland / Poodle mix) toy ny alika kely 3 volana, naterak'i Big Doodle Pups
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Newfypoo
Sary Newfypoo 1
saint bernard pyrenees be afangaro amidy
haben'ny bichon frize eo ho eo
saint bernard afangaro amin'ny mpiandry ondry alemanina
amerikana bulldog amerikana sy terrier mix
Chihuahua miharo anglisy bulldog